के तपाईलाई पिनासको समस्या छ ? यस्ता छन् जाडो आयुर्वेद उपचार - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
के तपाईलाई पिनासको समस्या छ ? यस्ता छन् जाडो आयुर्वेद उपचार
आयुर्वेद अनुसार जाडो मौसममा वातादि तीनै दोष र रगत पृथक पृथक वा एकै पटक शिरमा एकत्रित भएर स्वप्रकोपका कारण प्रकुपित भएर प्रतिशयाय उत्पन्न हुन्छ र प्रतिशयायको चिकित्सा नगर्नाले दुष्ट पिनास हुन्छ। नाकको नजिकै अनुहारका हड्डीहरूको भित्र हावा रहने रिक्त स्थानलाई साइनस भनिन्छ । यी साइनसहरूले मुख्यतस् टाउकोलाई हलुका बनाउने र बोलेको ध्वनिलाई गुणस्तरीय बनाउने काम गर्छन् । यिनै साइनसहरूमा अनेकौं तहहरु हुन्छन् जो विशेष द्वारमार्फत नाकसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसै तहमा हुने झिल्लीहरूले अनेकौं तरल पदार्थ अर्थात् म्युकसहरू उत्पादन गर्छन् र रौं जस्ता बनावट भएका सिलियाहरूको निरन्तर गतिले म्युकसलाई द्वारबाट बाहिर निकासा गर्छन् । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा त्यही साइनसहरूमा रहेको झिल्लीको संक्रमणलाई नै साइनुसाइटिस अर्थात् पिनास भनिन्छ।
-प्रतिशयाय (एलर्जिक राइनाइटिस)
पिनास रोगमा नस्यकर्म अति नै उपयोगी छ। आयुर्वेदको पञ्चकर्म चिकित्साअन्तर्गत पर्ने नस्यकर्म एक प्रधान संशोधन विधि हो । शिरप्रदेशको नेत्र, कर्ण, कण्ठ आदि अवयवहरूमा फिजिएर रहेका विकृत दोषहरूलाई बाहिर निकाल्न नासारन्ध्रद्वारा औषधिको प्रयोग गराउनु नै नस्य कर्म हो । द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद् व्याप्य हन्ति तान् अर्थात शिरको द्वार नासा९नाक० लाई मानिएको छ।त्यसैले नस्यले नाकमा व्याप्त भएर शिरका रोगहरुलाई नाश गर्छ।
पिनासका लागिअन्य घरेलु उपचारः
-नुनपानीले दिनको २(३ पटक कुल्ला गर्ने
अन्य बच्ने उपायहरु :
के तपाईको सास गनाउने समस्या छ ? यो घरेलु तरिका अपनाउनुहोस्
यस्ता खानेकुराले गर्भमा रहेको शिशुका लागि अत्यन्तै फाइदा हुन्छ !
चिसोमा दम रोगीले ध्यान दिनै पर्ने ७ टिप्स
छातीमा कफ जमे घरमै यसरी निको बनाउनुहोस्
यसरी बढाउन सकिन्छ शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ?
यसरी बढाउन सकिन्छ बालबालिकाको स्मरण क्षमता